Nano ara-nofo - Changzhou longxin milina Co., Ltd
Nano fitaovana ireo fitaovana izay manana lafiny iray, fara fahakeliny (0.1-100 nm) ao amin'ny telo-toerana na amin'ny lafiny natao ho azy ireo ho toy ny vondrona fototra, izay mitovitovy mitovy amin'ny haben'ny ny 10 ~ 100 ataoma akaiky miaraka fandaharana.
Azo zaraina ho sokajy efatra: Nano vovoka, Nano fibre, Nano Nano sarimihetsika sy ny andian-tsoratra. Ny fampandrosoana ny fotoana ny Nano vovoka no lava indrindra, ary ny teknolojia no tena matotra, izay ny fototry ny telo hafa karazana vokatra. Ny fikarohana momba ny fototry ny nanotechnology teoria sy ny fampandrosoana ny fitaovana vaovao no mandroso haingana, ary efa be mpampiasa amin'ny fitaovana nentim-paharazana, ny fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana elektronika, coatings sy ny orinasa hafa.
Fahazoan-dalana hidirana ny fitaovana ho an'ny vokatra ara-nofo Nano famokarana: ES / DS marina loatra telo-roller fikosoham-bary, DYS hydraulic andian-dahatsoratra telo-roller fikosoham-bary, WSP Series Fast Flow Bead Mill, WST andian-dahatsoratra turbo Nano fasika bary
Product tsipika: Nano Fitotoana Vary lena vokatra ara-nofo tsipika